Mashiinka Nadiifinta & Farsamaynta Abuurka Shiinaha 5XZS-10DS soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | SYNMEC
5XZS-10DS Mishiin Nadiifinta & Farsamaynta
Hilibka waxaa lagu quudiyaa qamadiga qamadiga ah (ikhtiyaar ah) si loo qolofsado, ka dibna kor loogu qaado wiish baaldi, geli jir yar oo shaandheyn gariir leh si looga saaro yar yar, wasakh weyn, iyo wasakh fudud, ka dibna sarreenku wuxuu galaa miiska culeyska si looga saaro abuur xun (qayb ahaan). la cunay, aan qaan-gaarin, cayayaan waxyeelo gaartay, abuur buka, iwm.). Ugu dambeyntii sarreenku wuxuu galaa jirridda shaandheynta gariirta si looga saaro wasakhda weyn iyo kuwa yar mar labaad, sidoo kale iniinta lagu qiimeeyo darajooyin kala duwan. Qamadiga bannaanka ka yimaadda waxa uu noqda iniin si toos ah loogu beeran karo dhulka.
Shaqada: Nadiifinta hawada, nadiifinta hore, kala saarida cuf-jiidadka, nadiifinta shaandhada gariirka iyo nadiifinta.
Awoodda: 10 tan/saacaddii iniinaha (ku tiriso sarreenka)
Heerka nadiifinta: >97%
Nooca nadiifinta shaandhada: gariirka kubbadda caagga ah
Wax gelinta korontada 3 waji
Awood: Wadarta: 15.75Kw
Wiishka baaldiga: 0.75Kw
Matoorka gariirka kahor-nadiifiye: 0.25Kw X 2 qaybood
Hawada sare ee hawada: 5.5Kw
Miiska cuf-isjiidadka: 7.5Kw
Matoorka gariirka jirridda ee ugu weyn: 0.75Kw X 2 qaybood
5XZS-10DS Nadiifinta Shinnida & Mashiinka Hagaajinta waxaa loogu talagalay nadiifinta hawada, nadiifinta hore, kala saarista cuf-isjiidadka, nadiifinta shaandhada gariirka iyo qiimeynta. Qaabkani waxa uu ka kooban yahay hawlo badan oo ku saabsan hal nooc oo mobiil ah oo nadiifinta abuur ah oo ka dhigaya mid ku habboon codsi ballaadhan.
Shaqooyin badan oo la isku daray hal mashiin
1. Nadiifiyaha ka hor 2. hawo hawo 3. miiska cuf-jiidadka
Hopper-ka qaadashada ayaa awood u siinaya buuxinta sarreenka qamadida si loo soo saaro sarreenka. Dabadeed sarreenka laga quudiyo wiishka baaldiga waxaa loo qaadaa nadiifiyaha ka hor. Ka bacdi si dhaqsi ah uga saar xajmi yar oo wasakhda ka badasho, ka bacdi iniinuhu waxay ku dhacaan qolka nadiifinta hawada si ay uga saaraan wasakhda iftiinka iyo boodhka. Qolka nadiifinta hawada ee weyn wuxuu keeni doonaa waxtarka nadiifinta hawada ugu fiican. Kadibna walxaha hawada la nadiifiyey waxay gashaa kala-soocida cuf-jiidadka si looga saaro abuurka xun (qayb la cunay, aan qaan-gaarin, cayayaanka waxyeello u geystay, abuurka buka, iwm). Ka dib marka lagu farsameeyo kala saareyaasha cuf-isjiidadka, iniinuhu waxay u iman doonaan labada ku jira hal jir shaandhayn gariir leh si looga saaro wasakhda weyn iyo tan yar. Macmiilku waxa kale oo uu dooran karaa afar lakab oo shaandho shaandho ah oo aan kaliya ka saarin wasakhda weyn iyo kuwa yar, laakiin sidoo kale iniinaha lagu kala saaro saddex heer (weyn, dhexdhexaad iyo yar).
Hore: 5XZS-20DS nadiifiyaha shinni nadiifinta hadhuudhka galleyda sisinta
Xiga: 5XZS-10DGT Nadiifinta Abuurka & Mashiinka Hagaajinta
Warshada farsamaynta digirta kafeega
Warshada Samaynta Abuurka Hadhuudhka
Warshada Abuurka Galleyda
Warshada Abuurka Qamadida
5XQS-5 Dhagax-dhige kafeega galleyda ah
Gaadhida suunka ee badarka galleyda